Nelson Mandella oo cusbitaal la dhigay - BBC Somali
Nelson Mandella oo cusbitaal la dhigay
Image caption Nelsom Mandella
Nelson Mandella waxa laga qaaday Cape Town, waxana la geeyey cubitaal ku yaalla magaalada Johannesburg, Arbacadii dhaweyd.
Ilaa yo hadda waxa lagu soo waramayaa in baadhitaan caafimaad loo wado, dareenkiisuna fiican yahay.
Madaxweynaha haatan ee Koonfur Afrika, Jacob Zuma, waxa uu sheegay in marka loo eego hadda da'diisa, markii uu inta ka dhalinyaraa ee caafimaadkiisu uu ka fiicnaaba, in Nelson Mandella uu qaadan jirey baadhitaanno badan oo caafimaad oo caadi ah.
1918 - Wuxu ku dhashay gobolka Cape-ta bari
1964 - Waxa lagu xukumay xabsi-daa'im
1990 - Waa la soo daayey
1993 - Waxa la siiyey abaamarinta Nobel ee nabadda
1994 - Wuxu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee madoobaa ee Koonfur Afrika
1999 - Wuxu ka degey xukunkii
2010 - Waxa uu noqday 92 jir
Xisbiga talada koonfur Afrika haya ee ANC iyo Xarunta Mandella ee agoomuhu, waxay iyaguna ku baaqeen in aanay weli jirin wax laga walaaco o khalkhal keeni kara, waxayna dadweynaha ugu baaqeen deganaansho.
Baaderiga Desmond Tutu waxa uu isna warbaahinta u sheegay inay ugu danbaysay Nelson Mandella Khamiistii hore oo uu soo booqday, xaaladdiisuna ay fiicnayd, hasse ahaatee in wax walba dhici karaan marka loo eego da'disa oo 92 jir ah.
Cusbitaalka haatan uu u jiro Nelson Mandella, dadka ku soo booqday waxa ka mid ah marwada haatan uu qabo ee Garaca iyo afafdiisii hore, Winnie.
Nelson Mandela oo haata aad u jilicsan, xaaladdiisa caafimaadna la sheegay inay ka si daraysey beryahani, waxa ugu danbeysay fagaarayaasha dadweynaha oo lagu arko bishii July ee 2010, cayaarihii kubadda adduunka ee lagu qabtay Koonfur Afrika